ကိုဗစ် နောင်ရိုး တိုက်ပွဲ စပါပြီ (Q ဝင်ရမယ့် စည်းကမ်းချက် အသစ် များ ထုတ်ပြန် လိုက်ပြီ) – Shwe Sar
Quarantine ဝင်ရတာ နဲ့ပတ်သက် တဲ့ အသစ်ထုတ်ပြန်ချက်
Facility quarantine —> ၇ ရက်၊ ၅ ရက်မြောက် swab ယူ၊ ၇ ရက်မြောက် အဖြေထွက် Negative ဖြစ်လျှင် အိမ်ပြန်။ Home quarantine ၇ ရက် ဆက်နေရမည်။ စုစုေ ပါင်း ၁၄ ရက်ပြည့်လျှင် လွတ်လပ်မည်။
Primary contact (ရောဂါလက္ခဏာ မရွိမွသာ) အိမ်တွင် ရောဂါသည်ရှိလျှင် Facility quarantine သာ ၁၄ ရက်ပြည့်အောင်ဆက်နေပါ။ Swab မယူတော့ပါ။
သံသယရှိ PUI ရောဂါလက္ခဏာပြသူများ ဆေးရုံရှိ Tent Q နှင့် မြို့နယ် သီးခြား Q များဝင်ရမည်။ တန်းစီးဇယားအရ Swab အလှည့်ကျ ယူမည်။ Positive ဆိုရင် COVID ဆေးရုံ တက် ရမ ည်။ Negative ဆိုရင် ၇ ရက်မြောက် အိမ်ပြန်။ Home Q ၇ ရက် ဆက်နေရမည်။
ကျန်မာရေးဝန်ထမ်းများ၊ GP များ —> positive လူနာနှင့်ထိတွေ့စဉ်. Surgical gown, Face shield ပါသော level2PPE ဝတ်ထား လျှင် ၁ ရက်ကျော်လျှင် Swab ယူ။ ၃ ရက်မြောက် အဖြေထွက်..negative ဖြစ်လျှင် အလုပ်ပြန်ဝင်။ Level2ဝတ်မထားလျှင် ၁ ရက်ကျော်လျှင် Swab ယူ..၊ Negative ဖြစ်လျှင် ၃ ရက်ကြာလျှင် ဒုတိယအကြိမ် swab ယူ.. negative ထွက်လျှင် အလုပ်ပြန်ဝင်။
Positive လူနာများ မတက်မနေရ ဆေးရုံတက်ရမည်။ သာမန်ရောဂါ လက္ခဏာပျော့လျှင် ၁၁ ရက်ပြည့်ပြီးလျှင် ဆေးရုံဆင်းရမည်။ ပြင်း လျှင် ၂၁ ရက် ပြည့်ပြီးမှ ဆေးရုံဆင်းရမည်။ ရောဂါလက္ခဏာ မရှိလျှင် Positive အဖြေထွက်သည့်နေ့မှ စပြီး ၁၁ ရက်ပြည့်လျှင် ဆေးရုံဆင်းရမည်။ ဆေးရုံဆင်းများ Home Quarantine ၇ ရက် ဆက်နေရမည် ဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက် —> ဆေးရုံမှ မဆင်းမီ.. Paracetamol မသောက်ပဲ အဖျားမရှိ၊ ရောဂါလက္ခဏာ မရှိ ရန် ၁ ရက်သာ လိုပါသည်။ သာမန်လူနာအများစုမှာ ရောဂါလက္ခဏာပြပြီး ၇ ရက်အတွင်း သက်သာကြသည်။ သို့သော် ၁၁ ရက်ပြည့်မှ ဆေးရုံဆင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Quarantine ဝငျရတာ နဲ့ပတျသကျ တဲ့ အသဈထုတျပွနျခကျြ
Facility quarantine —> ၇ ရကျ၊ ၅ ရကျမွောကျ swab ယူ၊ ၇ ရကျမွောကျ အဖွထှေကျ Negative ဖွဈလြှငျ အိမျပွနျ။ Home quarantine ၇ ရကျ ဆကျနရေမညျ။ စုစုေ ပါငျး ၁၄ ရကျပွညျ့လြှငျ လှတျလပျမညျ။
Primary contact (ရောဂါလက်ခဏာ မရှိမှသာ) အိမျတှငျ ရောဂါသညျရှိလြှငျ Facility quarantine သာ ၁၄ ရကျပွညျ့အောငျဆကျနပေါ။ Swab မယူတော့ပါ။
သံသယရှိ PUI ရောဂါလက်ခဏာပွသူမြား ဆေးရုံရှိ Tent Q နှငျ့ မွို့နယျ သီးခွား Q မြားဝငျရမညျ။ တနျးစီးဇယားအရ Swab အလှညျ့ကြ ယူမညျ။ Positive ဆိုရငျ COVID ဆေးရုံ တကျ ရမ ညျ။ Negative ဆိုရငျ ၇ ရကျမွောကျ အိမျပွနျ။ Home Q ၇ ရကျ ဆကျနရေမညျ။
ကနျြမာရေးဝနျထမျးမြား၊ GP မြား —> positive လူနာနှငျ့ထိတှစေ့ဉျ. Surgical gown, Face shield ပါသော level2PPE ဝတျထား လြှငျ ၁ ရကျကြျောလြှငျ Swab ယူ။ ၃ ရကျမွောကျ အဖွထှေကျ..negative ဖွဈလြှငျ အလုပျပွနျဝငျ။ Level2ဝတျမထားလြှငျ ၁ ရကျကြျောလြှငျ Swab ယူ..၊ Negative ဖွဈလြှငျ ၃ ရကျကွာလြှငျ ဒုတိယအကွိမျ swab ယူ.. negative ထှကျလြှငျ အလုပျပွနျဝငျ။
Positive လူနာမြား မတကျမနရေ ဆေးရုံတကျရမညျ။ သာမနျရောဂါ လက်ခဏာပြော့လြှငျ ၁၁ ရကျပွညျ့ပွီးလြှငျ ဆေးရုံဆငျးရမညျ။ ပွငျး လြှငျ ၂၁ ရကျ ပွညျ့ပွီးမှ ဆေးရုံဆငျးရမညျ။ ရောဂါလက်ခဏာ မရှိလြှငျ Positive အဖွထှေကျသညျ့နမှေ့ စပွီး ၁၁ ရကျပွညျ့လြှငျ ဆေးရုံဆငျးရမညျ။ ဆေးရုံဆငျးမြား Home Quarantine ၇ ရကျ ဆကျနရေမညျ ဖွဈပါသညျ။
မှတျခကျြ —> ဆေးရုံမှ မဆငျးမီ.. Paracetamol မသောကျပဲ အဖြားမရှိ၊ ရောဂါလက်ခဏာ မရှိ ရနျ ၁ ရကျသာ လိုပါသညျ။ သာမနျလူနာအမြားစုမှာ ရောဂါလက်ခဏာပွပွီး ၇ ရကျအတှငျး သကျသာကွသညျ။ သို့သျော ၁၁ ရကျပွညျ့မှ ဆေးရုံဆငျးရမညျဖွဈပါသညျ။
Previous post ကိုဗစ် Positive လူနာတွေ နဲ့ ထိတွေ့ လူနာမှန်သမျှကို မိမိအိမ် တွင် နေထိုင်စေပြီး ကုသတဲ့စနစ်ဖြင့် ကုသတော့မည်ဟု သိရ
Next post ရှမ်းပြည်နယ်က ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး နှီးဘုရားကြီးကို ဖူးမျှော်နိုင် ရန် တင်ပေး လိုက် ပါတယ်နော်